Ergo ka kala socota Sacuudi Carabiya iyo Iran oo mar kale ku kulmay Ciraaq | Dayniile.com
Home Warkii Ergo ka kala socota Sacuudi Carabiya iyo Iran oo mar kale ku...
Ergo ka kala socota Sacuudi Carabiya iyo Iran oo mar kale ku kulmay Ciraaq
Sacuudi Carabiya iyo Iran ayaa mar kale ku kulmay Ciraaq, sida ay maanta sheegeen ilo-wareedyo gudaha oo dhowr ah, ayada oo ay xoogeysteen wada-hadallada lagu qaboojinayo xiisadda ka dhex-oogan.
Iran iyo Sacuudiga, oo isaga soo horjeeda dagaalo dhowr ah oo ka s socda Bariga Dhexe, ayey wada-hadallada u billowdeen bishii April, markii ugu horreysay tan iyo markii ay xiriirka kala goosteen 2016.
Wada-hadallada oo ay marti-gelienyso Ciraaq oo isku dayeysa inay noqoto dhex-dhexaadiyaha gobolka, ayaa waxaa la billaabay intii uu xukunka hayey madaxweynihii hore ee Iran Hassan Rouhani, oo bishii August uu beddelay Ebrahim Raisi.
Wada-hadallada ayaa horseeday “horumar dhab ah” oo ku saabsan amniga Gacanka, waxaa sidaas sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibedda Iran Saeed Khatibzadeh, 23-kii September.
“Sarkaal Iranian ah ayaa Baghdad kula kulmay sarkaal Sacuudi ah, kadib kulamadii ay horey u yeesheen labada dal,” waxaa sidaas yiri il-wareed la hadlay wakaaladda wararka AFP.
Previous articleWaxaa goordhaw teendhada Afisiyooni lagu doortay Wasiirka Warfaafinta Cusmaan Abuukar Dubbe in uu Noqdo Senatar .
Next articleDoorashada Lix kamid ah kuraasta Aqalka Sare ee Gobolada Waqooyi oo la doortay
Xildhibaan Yuusuf Xassan Cabdi “ Ammaanka iyo Ganacsiga islii waa iska...
Xili shalay lagu kala Cararay islii sababo amaan ayaa waxaa arintaas ka hadlay Xildhibaanka laga soo doorto kamakuuji Yuusuf Xassan Cabdi. Masuulyiinta ganacsatada suuqa Islii...